छ लाख पर्ने बाइकको मूल्य तीन लाख ! – Khabarhouse
छ लाख पर्ने बाइकको मूल्य तीन लाख !
Khabar house | २९ पुष २०७६, मंगलवार १६:५८ | Comments
केशवराज पौडेल, काठमाडौ। केटिएम डुक २५० सिसीको बाइकको मूल्य बजारमा यतीबेला पाँच लाख ८९ हजार पर्छ। सोही बाइक बिलबुक सहित तीन लाख रुपैयामा पाउनुहुन्छ भने त्यो खरिद गर्नुहुन्छ की हुँदैन। त्यस्तै फन्दामा परे काभ्रे बनेपाका कुन्दन ढुंगाना । चीनजानको साथीले ६ लाख मूल्य पर्ने केटिएम डुक बाइक तीन लाखमै पाउने भनेपछि उनले आँखा चिम्लिएर तीन लाख तिरेर बाइक किने ।
उनले तीन लाखमा पाएको बाइकको नम्बर थियो बा ९८ प ५८७ । ढुंगानाले पुसको अन्तिम साता बाइक पास गर्ने योजना बनाएका थिए। सस्तो दाममा बाइक पाएपछि उनले तीन लाख रुपियाँ बाइक किनाउने कुन्साङ लामालाई तीन लाख बुझाए। प्रहरीले बनेपामा सस्तो मूल्यमा मंहगो मोटरसाइकल किनबेच भएको सूचना पाइसकेको थियो । कुन्दनले डुक बाइक तीन लाखमा पाएको सूचनालाई पछ्याउँदै इलाका प्रहरी कार्यालय बनेपाका प्रहरी निरीक्षक योगेन्द्र तिमल्सिना ग्राहक बनेर बनेपाको सस्तो बाइक पाउने ठाउँमा पुगे।
उनले केही बाइक हेरे र अन्त्यमा कुन्दनलाई नियन्त्रणमा लिए भने उनको ब्लूबुक जफत गरे। प्रहरीले काभ्रेमा तीन लाखमै नयाँ केटिएम डुक बाइकको किनबेच भैरहेको सुनेपछि सुरुमा पत्ताएन । यती महङ्गो मोटरसाइकल कसरी त्यती सस्तो मूल्यमा पाइएला भनेर उसले अनुसन्धान अघि बढायो । प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको ब्लूकबुकको सहायतले प्रहरीले मोटरसाइकल चोरको भन्ने पत्ता लगायो ।
तीन लाखमा मोटरसाइकल किन्ने काभ्रेपलाञ्चोक बनेपाका कुन्दन ढुंङ्गानालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो । नियन्त्रणमा लिएका कुन्दनसँग दुरुस्त मिल्ने बिलबुक पनि थियो । कुन्दनले आफूले यातायात व्यवस्था विभागमा गएर सो बाइक केही दिनमा पास गर्ने आश्वासन पाएको सुनाएपछि प्रहरीले मोटरसाइकल किन्ने कुन्दन र किनाउने काभ्रे तेमालका कुन्साङ लामालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धानलाई अघि बढायो ।
तीन लाखमा किनेको बाइकको बिलबुक यातायात व्यवस्था विभागमा भिडाउँदा नक्कली प्रमाणित भयो। त्यसपछि खुल्लो आधा मूल्यमा बाइक पाउनुको रहस्य । केही महिनाअघि काठमाडौंको लक्ष्मी श्रेष्ठले खरिद गर्नुभएको मोटरसाईकल हराएपछि उहाँले एभरेष्ट इन्सो रेन्सबाट बीमा रकम पाइसक्नु भएको खुल्यो । त्यो बाइकको वास्तविक नम्बर भने प्रदेश ३–०२–००६ प ९१३७ रहेछ ।
काठमाडौंबाट बाइक हराएपछि उहाँहरुले आवश्यक प्रकृया पुरा गरेर बीमा रकम समेत भुक्तानी पाउनु भएको रहेछ । केटिएम डुक मोटर साइकल खरिदमा मध्य स्तताको भुमिका खेलाउने काभ्रेका कुन्साङलाई प्रहरीले सोधपुछ गर्दा सो बाइक काभ्रे तेमाल–९ का धावा तामाङ र धनबहादुर तामाङले चो’री गरेका रहेछ कुन्साङलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर सार्वजनिक अप’राधमा मु’द्धा चलाएको छभने धावा तामाङ र धनबहादुर तामाङ केन्द्रीय कारागार डिल्लीबजारमा मोटरसाइकल चोरीकै अप’राधमा स’जाय भोगिरहेका छन् । काभ्रेमा एक सयको हाराहारीमा नक्कली ब्लू बुक बनाएर चो’रीको बाइक दौडिने गरेको अनुमान स्थानीयको छ ।